China Elastic fireproof sealant ifektri abakhiqizi | Weicheng
Igama lomkhiqizo I-sealant evimba umlilo
Incazelo Model Ama-25 ama-PC / ibhokisi
Izinzuzo zomkhiqizo Ingxenye eyodwa, enokuguquguquka okuhle nokubambelela, okwenza isakhiwo senethiwekhi esinyene ngemuva kokushiswa ngomlilo; ingavimbela ngempumelelo ilangabi nokudluliswa kokushisa; esebenza kahle ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, ukwakhiwa okulula
Ububanzi Bokusetshenziswa 1.Ukuvalwa ngaphezulu kwezikhala zesikhala esishiyile dengwane, ukubamba udonga, amapayipi womshini, amapayipi wokungenisa umoya, amapayipi wokufaka okushisayo, njll. 2. Izikhala zokuvala ibhodi zokuvala umlilo; ukuhlangana phakathi kwaphezulu kodonga naphansi; 3. Ukuvezwa Umthungo wokuxhuma ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme unezidingo eziqinile zokubekwa uphawu kokuvikela umusi; ukubekwa uphawu kocingo loxhumano lohlaka
Ukumelana Nomlilo 120min
ukufaka ijoyini lokufaka uphawu lohlaka lomnyango ngezidingo eziqinile zokuvikela intuthu. Uhlobo lokukhulisa uphawu olungenamlilo, ukuze uthole umphumela odingekayo wokuvikela umlilo, sebenzisa ubukhulu obunqunyiwe ukunquma ukuthi i-sealant inokuxhumana nobuso bensimbi yepayipi ukuthola amandla amakhulu okunamathela. Ukuze uthole i-mastic eyeqile, ngaphambi kokuba iqine, ingasuswa ngamanzi. I-sealant evimba umlilo, hlanza ukuvulwa, bese ulungiselela ukufaka indawo ehlangene ye-FS-I kufanele isuswe imfucumfucu ehlakazekile, uthuli, amabala kawoyela, isithwathwa, i-wax, njll., Futhi ihlale yomile. Ingxenye eyodwa, esekwe emanzini, i-acrylic acid-proof sealant is a high-performance and elastic antifungal sealant. Ingamelana nokushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu. Ingamelana nokushisa okuphezulu, ukushisa okuphansi, i-ultra-high, medium, ingcindezi ephansi nengcindezi engemihle, kanye nejubane elikhulu. Ingxenye eyodwa ye-sealant, enganamatheli, ebomvu ebomvu, enamathisela i-sealant emnyama, ayiqinisi ekamelweni lokushisa futhi igcizelela ekushiseni okuphezulu kwe-Flame retardant sealant uhlobo olusha lwento eyodwa yomlilo. Eminyakeni yamuva nje, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zentuthuko yokwakha ubuchwepheshe bokonga amandla, kuhlanganiswe nezinzuzo zemikhiqizo yasekhaya neyangaphandle, kwenziwa ngezinto eziphezulu zamangqamuzana.
Ngokuvamile, indlela emile isetshenziselwa ukuhlonza, ehlukaniswe nge-FV-0, Fv-1 ne-Fv-2 ngokuya ngomphumela wokuhlola kusuka phezulu kuye phansi. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukubekwa uphawu kwamakhethini odonga olungacimi umlilo, futhi idinga ikhono le-anti displacement deformation kanye nomlilo nokuvikela intuthu, i-Acrylic acid fire-proof sealant iyahambisana nohlobo lwesibhamu. Uhlobo lwesilinganiso somqondo wobufakazi bomlilo uhlobo oluthile lwento yokubonisa umlilo luhlobo lwezinto zokufaka uphawu lweplastikhi zepulasitiki zokuxhuma, ezinokusebenza okubili kokufaka uphawu nobufakazi bomlilo, futhi zilungele ukwakhiwa kobufakazi bomlilo. Ububanzi bokwakha buhlanganisa amapayipi wensimbi, amapayipi afaka ukushisa kanye namajoyinti wokwakha. Imichilo yokunamathisela esetshenziswe eminyango enobufakazi bomlilo ye-fire-proof sealant expression ayikwazi ukuhlangabezana nezimfuneko zokuqinisekisa umlilo, ngokubuka uhlole ukuthi azikho yini izindawo ezincane ezimhlophe zezinto ezingavuthwa emapheshaneni enjoloba. Uma usebenzisa i-lighter ukuyikhanyisa, yini enye, umane ungafaki imichilo ye-sealant, ethinta kakhulu umsebenzi wokuvimbela umlilo nomusi wokuzihlukanisa weminyango yomlilo yensimbi.
I-sealant engangenamlilo ilungele ukwakhiwa okuhlangene phakathi kophahla nodonga lomzimba, ikakhulukazi ukujoyina okude. Ngoba ukwakhiwa kokufafaza kulula, kungonga abasebenzi futhi kunciphise izindleko ngenkathi kwakhiwa. Ngemuva kokuhlanzwa ngamanzi, ingalapheka ngokuphelele futhi ipendwe. Ububanzi obukhulu bejoyini lokumelana nomlilo bungaba ngamasentimitha ayisi-6, futhi ukusebenza kahle kokumelana nomlilo endaweni ehlanganisiwe kungafika emahoreni amabili.
Olandelayo: Ikhebula lomlilo elidonsa umlilo